Hawaii COVID Tsy voafehy sy mihaona amin'ny fizahan-tany fizahan-tany sy fahanginana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hawaii COVID Tsy voafehy sy mihaona amin'ny fizahan-tany fizahan-tany sy fahanginana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ajanony ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka handefa sidina vaovao mankany Hawaii
Ny fizahantany any Hawaii dia manana krizy ara-pahasalamana izay tsy te hiresaka. Ireo mpitsidika tonga isa marobe dia mitondra fidiram-bola ilain'ny fanjakana, ka toa tsy hanova zavatra ity krizy ara-pahasalamana ity. Tongasoa eto amin'ny marary iray Aloha Fanjakana. Enga anie ka hanao vaksiny ny mpitsidika rehetra. Mpitsangatsangana any Hawaii, mitazà ary miomàna amin'ny diany fitsangatsanganana ara-pahasalamana mandritra ny androm-piainana.
Ny governoran'i Hawaii Ige dia mandà tsy hamaly eTurboNews sy Hawaii News Online.
Ny ben'ny tanànan'i Honolulu Rick Blangiardi dia mangina ary mitoka-tena amin'ny fanontaniana tsy mahazo aina eTurboNews.
Ny tale jeneralin'ny fizahan-tany any Hawaii John De Fries sy ny CEO CEO Hawaii Lodging and Tourism Association Mufi Hannemann dia nisoroka fanontaniana hatramin'ny nanombohan'ny COVID-19 olana ho an'ny indostrian'ny mpitsidika any Hawaii.
COVID-19 dia tsy voafehy any Hawaii, fa mandeha ny fizahan-tany. Ireo mpitondra fizahantany dia tsy misy holazaina amin'ireo mpitsidika. Ny mpitsidika toy izany dia tokony hatahotra isan'andro. Ity fanahiana ity dia hihaonana amin'ny fahanginan'ireo izay voafidy hitarika.
Ny fahanginana dia valinteny mahavonjy endrika fantatra amin'ny kolontsaina aziatika, midika izany fa ny orinasa PR dia toy ny mahazatra any Hawaii.
Enina andro lasa izay, ity famoahana ity nitatitra ny isa voarakitra an-tsoratra momba ny tranga COVID-19 tany Hawaii. Ity isa ity izao no fiakarana faharoa farany avo indrindra, ary rakitsoratra vaovao androany dia midika fandresena hafa ho an'ilay virus.
Raha jerena ny 53.7% ny mponina ao Hawaii dia vita vaksiny tanteraka, ary 71.7% no nahazo Pfizer na Moderna farafahakeliny, vao mainka nampatahotra ireo aretina vaovao satria saika ny 46.3% mbola tsy vita vaksiny tanteraka. Na dia nandritra ny fotoana naharatsy indrindra tamin'ny valanaretina aza dia tsy hita izany tao amin'ny fanjakana.
Na dia nijanona aza ny fizahan-tany sy ny toekarena talohan'ny 15 Oktobra tamin'ny taon-dasa, ny isan'ny aretina toy izany dia tsy nanakaiky akory ny zavatra iainan'i Hawaii ankehitriny.
Ny olona iray dia afaka miady hevitra fa tranga 8 fotsiny no azo ampifandraisina amin'ny dia omaly, fa ny tsy ampahafantarina dia tranga 61 fotsiny no azo ampifandraisina amin'ny valan'ny fiarahamonina, fa ny tranga fanampiny an-jatony, ka mahatonga ny ankamaroan'ny tranga tsy fantatra.
Tahaka ny efa niseho nandritra ny krizy, ny Hawaii fizahan-tany fizahan-tany mangina, ary ankehitriny ity fahanginana ity dia akon'ny Gouverneur Ige, ny Ben'ny tanàna, ary ny olon-drehetra tompon'andraikitra.
Manakaiky ny mpitsidika 30,000 no tonga any Hawaii isan'andro isan'andro, misokatra ny trano fisakafoanana, saron-tava ary ny halavirana ara-tsosialy toa tsy dia zava-dehibe loatra.
Mampihomehy, afaka nilaza ny olona iray fa ny toekarena no nitarika ny fahasalamana, saingy ny Fahefana fizahan-tany Hawaii dia sahirana nitady fomba hanakiviana ny fizahan-tany be loatra.
Ny anton'izany dia tsy COVID-19 fa ny fiarovana ny olana ara-kolotsaina sy ny fiovan'ny toetrandro.
Ao amin'ny tatitra COVID-19 farany izay tatitra avy amin'ny Governemanta ny Aloha State, 655 tranga vaovao COVID-19 any Hawaii no nitondra ny totaliny ho 44,617 (tafakatra 1.4% tamin'ny andro teo aloha). Ity no isan'ny tranga avo indrindra voarakitra ao anatin'ny iray andro.
Araka ny filazan'ny lefitra lefitra Josh Green, ity fiakarana ity dia vokatry ny Delta Variant. Vokatr'izany dia mitombo ny fampidirana hopitaly ary ankehitriny dia 166 no tsaboina ao amin'ny hopitaly, taha 6.89% positivity.
Hatramin'izao, fitsapana COVID-1,883,809 miisa 19 dia notontosaina 42,439 ka nahitana famakiana tsara sy nanamarihana ny taha positivity androany 6.9%.
Amin'izao fotoana izao, ny tranga isan'andro dia 437.6. Nahatratra 4,391 ny tranga voalaza tato anatin'ny 14 andro. Ny isan'ny maty hatreto dia 538 (1.2%).
Ny fahasimban'ny tranga ankehitriny dia:
County County Hawaii: 131
Fivondronan'i Maui: 69
County County: 7
Hatreto dia milamina daholo izao tontolo izao. Tendrombohitra, hotely ary sidina feno. Ny mpitsidika dia tsy fahita matetika manao sarontava ary mifalifaly eny amoron-dranomasina, any amin'ny trano fisakafoanana, pisinina, alim-pandihizana ary toerana manintona.
Izay monina any amin'ny faritr'i Waikiki dia maheno ny sirenan'ny marary mpamonjy voina izao 24/7 izao, feno ny fandriana amin'ny hopitaly, saingy noho ny hamaroan'ny olona vita vaksiny, soa ihany fa ambany hatrany ny tahan'ny fahafatesany.
Hisy fameperana ve ny fantsona? Tsy azo inoana, raha ny fanazavana nomen'ny Governora Ige.
11 Aogositra 2021 amin'ny 09:30
Olona 131 any Big Island no voan'ny gripa… toa tsy maika izany ho ahy. Ny ankamaroany dia ho salama samirery ary hanohy ny fiainany avy eo toa ny tokony ho izy rehetra. Tsy ilaina intsony ny fanakatonana, ny sarontava na ny fanalavirana ny fiaraha-monina - efa herintaona mahery izahay no tao ary tsy mandeha izy ireo.
6 Aogositra 2021 amin'ny 17:44
Maybi feno fako ianao manaparitaka vaovao diso mipetraka ao amin'ny Big Island aho ary very olona 4 mba hanome ahy covid ahy hoe ahoana no lainga rehefa misy olona voan'ny isan'andro isan'andro amin'ny taha ambony ny adala tsy mitafy saron-tava ataon'izy ireo tsy fidin'ny adala. hahazoana vaksiny amin'ity taham-bola ity dia hanakatona indray izahay noho ny adala toa anao manaparitaka vaovao diso
6 Aogositra 2021 amin'ny 01:04
Ny Nosy Big no nanana fiakarana faharoa lehibe indrindra androany, saingy ekeko fa malalaka malalaka izany- tsy toa an'i Waikiki na Oahu amin'ny ankapobeny.